आफ्नै पोखरी सहित भिला। रेडिसन संग्रह प्रमोदव्ध प्रमोदवन सूचना स्पा, सोची होटेल। आन्तरिक पर्यटन र मनोरन्जनको लागि केन्द्र
सम्पर्कको माल्भेडभ्सका रनली टापुमा तपाईंको लागि पर्खँदै:
BANAYAN रूख * प्रमोदवनको बीचमा प्रमोदवनको बीचमा अनौंठो छुट्टी
CONTAVE लेमोरिया रिसोर्सिया रिसोर्ट * प्रकृति
प्रिय पाहुनाहरू! होटेलका केही साइटहरू निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हामी अस्थायी असुविधाको लागि माफी चाहन्छौं।
परिवार होटल "Mantor निडर बे", * Sime मा, पहिले "भलो खाडी" भनिन्छ - क्राइमिया मा सबै भन्दा राम्रो होस्टलहरू! क्राइमिका पाहुनाहरूका अनुसार अग्रणी विश्व पर्यटक पोर्टल त्रिपोविसार ट्रिप्याडोजरले होटल पुरस्कार तोक्दै: सर्वश्रेष्ठ "2020।
कालो समुद्री गाउँ समुद्री समुद्री गाउँ शिपिलले यलोटाको नजिकको मध्यपरको सब भन्दा बढी प्रेमी ठाउँहरू मध्ये एक। नजिकैको क्याट्सवेल र लियोरोभका गाउँहरू हुन्। रिसोर्ट ट्र्याक्सले आश्चर्यकर्मको सबैभन्दा असामान्य र वातावरणीय वायुमंडलीय ठाउँमा अवस्थित छ, आश्चर्यजनक हावा, ऊर्जा र समुद्री दृश्यहरूको साथ। यो गोपनीयता, प्राकृतिकी प्रकृति, लक्जरी समुद्री र हिमाली परिदृश्यहरू द्वारा जोडिएका छन्, शिमज र यल्टाको सभ्यीकरण र मनोरन्जनका सबै फाइदाहरू उपलब्ध छन्।
daylared पाहुनाहरूले लेख्छन् कि निलो बे मर्मोर होटल मा एक दक्षिण तट मा एक दक्षिण तट को दक्षिण तट को दक्षिण तट मा चम्किरहेको छ। हावा साँच्चै अनौंठो छ - यो यहाँ थियो कि यहाँ एक भिजेको थियो कि त्यहाँ औषधीय उद्देश्यमा कुनै नतीजा हो, बिरालाको पहाड र कालो समुद्रको दृश्य मन पर्थ्यो। आज यसको विकासमा, होटलले मेलमिलापको पछिल्लो प्रवृत्ति र आधुनिक विश्राम पूर्वाधारको साथ परम्परा र ईतिहासको संयोजन गर्दछ।
होटल होटल माउन्टिल ज in ्गमा जोन्लीको उपत्यकामा पेरून्स पहाडको पश्चिमी ढल्किमा रहेको पश्चिमी ढल्किसलमा, समुद्रबाट 40000 मिटर। पछिल्लो शताब्दीमा, भ्वाइनरी सानिटोनियमले निलो खाडी र धेरै पाहुनाहरूमा काम गर्न थाल्यो, उनीहरूले आगमन पछि 2-; दिन पछि धेरै राम्रो महसुस गर्न थाल्छन्।
"निलो बे मानव" हरेक वर्ष हरेक वर्ष परिदृश्य र अपडेट गरिएको छ, नयाँ प्रीमियम नम्बरहरू देखा पर्दैछन्, विवेकी पाहुनाहरू। 2021 मा, होटलले contry c कम्प्याक्ट आधुनिक संलग्न र एक अद्वितीय, ध्यानपूर्वक 1 th औं शताब्दीको "1 th औं शताब्दीको" लिनियन "अलज्ज बनायो। एक कम्पनी वा परिवारको लागि एकल भिलामा बुकिंग उपलब्ध छ।
गर्मीमा, एक नि: शुल्क शटल सेवाहरूले होटलको समुद्री तट क्षेत्रमा बचाउँछ, प्रत्येक 1-2-20 मिनेट। आरामदायक मिनी बसहरूको पथमा समय 10 मिनेट हुन्छ। समुद्री तट वाइफाइ, क्यानडोज, सूर्य बेड, क्याबिन, शौचालय, शौकिक र प्राणहरू सहित सुसज्जित छ। भिडियो निगरानी बाहिर, तौली र पानी जारी गरिएको छ।
त्यहाँ एक स्टिरियोटिटाइप छ जुन माल्दिभ्समा होटलहरू मात्र अनैतिक मनोरन्जन अवस्था प्रदान गर्दछ र कुनै पनि छुटकारादाताले केवल पाँच-स्टार अतिरिक्त वर्ग होटेलहरू मात्र आशा गर्छन्। वास्तवमा त्यहाँ माल्दिभ्समा होटलहरूसमेत होटलहरूसमेत छन्, तर हामी बताउँछौं, धेरै होटल * * बीच भ्रमित हुन सक्दैन।
<< p> पहिलो हेजल्स जस्तो, सबै होटलहरू जस्तै: राजा-आकारको आकारमा उच्च-गुणवत्ता कपडाको साथ, रब्राफको रोमान्टिक दृश्य खोलियो। तर कसरी त्यसपछि माल्दिभ्सको होटल छनौट गर्नुहोस्? एउटा सिक्का नबोल्नुहोस्! वास्तवमा तपाईले थोरै गहिरो खन्न लाग्नु पर्छ र तपाइँ बुझ्नुहुनेछ कि सबै रिसोर्ट्स माल्दिभ्स एक रेस्टुराइन्डेन्ट रेस्टुरेन्ट वा बहु-स्तरीय भिलाहरू एक घर थिएटर थिएटर थिएटर थियौ र पोखरी अनन्त प्रभावको साथ।
हामीले माल्दिभ्समा सबै भन्दा राम्रो होटलहरू * * प्रदान गरिएका सेवाहरूको गुणस्तर र लक्जरी, छुट्टिएका प्रतिबद्धता र टापुहरूमा मनोरञ्जनको लागि हाम्रो अनुभव दियौं ।
रिसोर्ट दुई सुरम्य टापुहरूमा जटिल छ - खेल र चिसो, - काठको ब्रिज द्वारा जडित। चिल रोमान्सका लागि बढी उपयुक्त छ, प्ले - बच्चाहरूसँग परिवारहरू। रिसोर्टल्याण्डहरू आक्रामक डिजाइनहरू र आर्मेन्सहरू छन्: बाँस वा मार्बल फ्लोर, फ्रेस्को समाप्त, एक वा बढी पोखरीहरू, व्यक्तिगत बटलर सेवाहरूको ठूलो मुख्य बाथरूमहरू।
orlol: ढोल। BAD बाट स्थान: हाइड्रोलेनमा 400 मिनेट। होटललाई रेन्जर: एक साधारण भागमा, एक निजी विमान वा आन्तरिक उडानमा।
2017 को गर्मी मा खोलियो र आकाश प्रसिद्ध मोडेल Anestandra Alberantresse र फिल्म निर्देशात्मक ईशियाका स्टेजोर, जो डिसेम्बर 201 मा आयो। होटलले सबै कोठाहरूमा एक विशाल अनन्त पोखरी, स्मार्ट उपकरणहरू आनन्दित हुनेछन्, होटेलको बोटानिकल गार्डेनिकल बगैंचामा स्पारन रिजर्व, पर्टमेरिन स्कूटर, प्यारासेन्डिंग। सूचका फोटोहरू, एक प्रसिद्ध फेसन मोडेल जस्तै, तपाईंको इन्स्टाग्राम उडाउँदछ।
तपाइँको सबै अपेक्षाहरू भन्दा बढी। बेडरूमको साथ दुई-स्तर भिलाहरू, पानी र प्यारारामिक विन्डोजहरू अन्तर्गत पूर्ण रूपमा विलीन - एक किसीन एक रिसोर्ट मात्र होइन, तर सबै माल्दिभ्स पनि। थप रूपमा, संयोजले यसको आगन्तुकहरूलाई प्रख्यात क्षतिग्रस्त इताडामा स्वादिष्ट बीफ लिपिको आनन्द लिनको लागि प्रस्ताव गर्दछ; स्पारमा आराम गर्नुहोस् - पुरस्कारको मालिक "सर्वश्रेष्ठ निजी टापु स्पा र होटल स्पाअल, घृणा गर्छु।" - - - विश्व ब्रान्ड र थालगोको प्रजातिको माध्यम प्रयोग गर्दै; माल्दिभ्समा सब भन्दा राम्रो घर Reefs को तटईको संसार जाँच्नुहोस्।
atoll: दक्षिण अर्रि, रंगाल टापु। BAD बाट स्थान: Hydrosapol मा minutes0 मिनेट। स्थानान्तरण: नजिकको एयरपोर्ट वा स्थानीय एयरपोर्टहरूमा समुद्री एयरपोर्टहरू, र त्यसपछि डु .्गामा।
idyllic परिदृश्यहरू, मानौं विज्ञापन पोष्टरहरूबाट प्रतिलिपि गरिएको छ, जस्तो कि प्रकृतिको सौन्दर्यको कदर गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको गहिराइमा। क्रिस्टल स्पष्ट स्पिनोज पानीहरू, चकित हिउँ-व्हाइट-सेतो (र ठाँउहरू, अजान तरवारहरू र वर्षाका उष्णकटिबंधीय वनस्पतिहरू।
धेरै जसो होटेललाई समान विशेष अवशेष परिस्थिति प्रस्ताव गर्दछ। हामी तपाईंलाई Seychells मा सबै भन्दा राम्रो होटलहरूको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछौं।
होटेलहरू यस विश्व होटेल ब्रान्डलाई सम्भावित जीवित जीवित अवस्था र उच्च सेवाको स्तर द्वारा छुट्याइएको छ। यो from मा सबै भन्दा राम्रो होस्टहरू मध्ये एक हो। मह, महीन खाडी को लागी एक आश्चर्यजनक सुन्दरता मा अवस्थित। उनको विशिष्टता तथ्यमा छ कि होटललाई 117 हेक्टेयर कब्जा गर्दै 117 हेक्टरले घेरिएको छ। समुद्र तटको लम्बाई 80000 मिटर छ।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्नेछ कि सबै उष्णकटिबंधीय घरहरू एक अर्काबाट राम्रो दूरीमा छन्। तसर्थ, तपाइँले छाप पाउनुपर्दछ कि तपाईं यस उष्णकटिबंधी प्रमोदवनमा एक्लै हुनुहुन्छ। इलाकामा आन्दोलन बग्गी विद्युत् कारमा नि: शुल्क छ, जुन कोठाबाट कथित गर्न सकिन्छ।
पावर ब्रेस्ट प्रणालीमा गरिएको छ (तिनीहरूलाई सिधा कोठामा दिइनेछ) र आधा बोर्ड। त्यहाँ तीन रेस्टुरेन्टहरू छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय, थाई र क्रिएल भाँडाहरू तयारी गर्दै छन्।
कुनै पनि होटेलको रूपमा, त्यहाँ एक निजी बयान रूख स्पा एसपीए छ, जसमा पाहुनाहरूले मसाज, पिल्डिंगहरू, विराम चिह्नहरू प्रदान गर्दछन्। केन्द्रको एक सौन्दर्य सैलोन र एक Boutick छ, जसमा तपाईं ब्रान्डिड प्राकृतिक प्रसाधन प्रसाधन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
होटेलको पानी खेलकुद केन्द्र छ, जसमा तपाईं डाइभिंग, स्नडुलफ्लिंग, कट्टर-समुद्री माछा मार्ने क्रममा साइन इन गर्नुहोस्।
Contemen Lemuria रिसोर्ट एक शानदार पाँच-स्टार होटल लक्स हो, जुन प्रसालिन टापुमा एन्स्टलन खाडीमा अवस्थित छ। यसको क्षेत्र 1 1500 हेक्टर लिन्छ। यस होटलमा मात्र 1 18-प्वाल गोल्फ कोर्स र एक हेलशिद छ।
<< p> पाहुनाहरूले तीन शानदार समुद्रमा समय खर्च गर्न सक्दछन्। ती मध्ये एकमा, ग्रान्ड एसएचओस कलकन विशाल समुद्री कम्बलले अण्डा पार्छ, र पर्यटकहरूले साना कछुवाहरूको प्रशंसा गर्छन्। यद्यपि यो सब भन्दा लामो समुद्री तट हो, जबकि ठूला छालहरू ठाउँमा फेला पर्दछ।
अर्को समुद्री किनार रिसोर्टको केन्द्रीय भागमा अवस्थित छ, जुन पीसी एन्सको कर्लान। यो छाता र सूर्य ओछ्यानमा सुसज्जित छ। वयस्कहरू र बच्चाहरू यहाँ आराम गर्न सक्छन्। Ance जियोर्टेट जंगली, तर ऊ वास्तवमै सबैभन्दा सुन्दर र रोमान्टिकको शीर्षक योग्य छ। Lyzhik ले तौलियालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दछ। र किमर्सले स्वादिष्ट खाजाको ख्याल राख्छन् यदि तपाईं सबै दिन प्रकृति संग एक्लै हुन चाहनुहुन्छ भने।
वास्तुकलाज र आन्तरिक ठाउँ प्रसालिनको प्रकृतिको अनुपातको अनुवासनमा बेपत्ता पारिन्छ। सलह्रालयको निर्माणकर्ताले केवल प्राकृतिक सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्थ्यो: काठ, ढु stone ्गा, पराल र अनन्य गुलाबी ग्रेनाइट। होटल मालिकहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूको हेरचाह गरे। विशेष गरी कछुवाहरूको लागि, ज्योति माउन्ट गरियो, जसले यी सरीसृपहरूलाई अण्डाहरू राख्नका लागि चोट पुर्याउने छैन।